पर्यटनलाई अध्यात्ममा जोडेर देश विकास गर्न सकिन्छ | गृहपृष्ठ
Home शनिबार अन्तर्वार्ता पृष्ठ अन्तर्वार्ता पर्यटनलाई अध्यात्ममा जोडेर देश विकास गर्न सकिन्छ
अन्तर्वार्ता2views
पर्यटनलाई अध्यात्ममा जोडेर देश विकास गर्न सकिन्छ
जनकपुरमा जन्मिएका स्वामी आनन्द अरुण सिभिल इञ्जिनीयरिङका विद्यार्थी थिए । सानैदेखि अध्यात्ममा झुकाव राख्ने उनीभित्रको गुरुको खोज ओशोको सम्पर्कमा पुगेपछि टुङ्गियो । सन् १९७४ मा ओशोबाट दीक्षित स्वामी आनन्द अरुण इञ्जिनीयरका साथै ओशोका सन्देश प्रवाहक पनि बने । नेपाल तथा नेपालबाहिर ओशो सेण्टरको विकासमा सक्रिय स्वामी अरुण तपोवन नेपालका संस्थापक आचार्य तथा प्रमुख हुन् । आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले देशको आर्थिक समृद्धि विषयमा उनीसँग गरेको नेपाली अर्थतन्त्रबारेको कुराकानी :
तपाँई एक आध्यात्मीक गुरुका नजरमा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र निकै बिरामी देख्छु । म दुनियाँ घुमिरहन्छु र अन्य देशहरुको अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन पनि देखिरहेको छु । यूरोप र अमेरिका अगाडी बढेको सय वर्ष भयो । विगतको ५० वर्षमा हामीभन्दा गरीब एशियाका सिङ्गापुर, मलेशिया, ताइवान, चाइना पनि अगाडी बढिसके । म सन् १९८० मा चाइना जाँदा यहाँ बरु गाडीहरु देखिन्थे, त्यहाँ मानिसहरु पुराना बस वा साइकलमा हिंड्थे । कसैकसैसँग भएका पुराना मोटरसाइकल गुड्दा मानिसहरु बाटोमा हेरेर बस्थे । तर अहिले आएर चाइना संसारको आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ । हामी चाहीँ एशियाको त सबैभन्दा गरीब देश हुँदैछौं र दुनियाँकै सबैभन्दा गरीब देशहरुमध्ये एक देश पनि हौं । कुनै स्रोत नभएर वा प्राकृतिक प्रकोपको देश भएको भए गरीब भए पनि प्रकृतिलाई दोष दिन मिल्थ्यो । कुनै समस्या नै छैन । यति समस्या विहिन त राष्ट्रै छैन । अलिअलि समस्या राजनीतिले खडा गर्ने कोशिस गरेपनि अहिलेसम्म त्यस्तो गम्भिर सङ्कट छैन । तर पनि दिन प्रतिदिन गरीब हुँदै गइरहेका छौं ।
अर्थतन्त्रको आधरमध्ये एक पर्यटन हो । यो वर्ष त झन् पर्यटक आउन नै पनि कम भयो । मैले तीस वर्षदेखि लेख लेख्दै आइरहेको छु र धेरै पहिले देखिनै मैले भन्ने गरेको छु कि, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आकर्षण हामीसँग छ । सिङ्गापुरले जब डेढ करोड पर्यटक भित्र्याउन सक्छ, हङ्कङ्गले तीन करोड भित्र्याउन सक्छ, आइफेल टावर देखाउन फ्रान्सले छ करोड पर्यटक भित्र्याउन सक्छ । दुनियाँमा तीस यस्ता राष्ट्र छन् जसले आफ्नो जनसङ्ख्याभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सक्छन् । उनीहरुसँग प्राकृतिक सम्पदा मैले देखिनँ । सिङ्गापुरसँग के छ प्राकृतिक सम्पदा ? हङ्कङ्सँग के छ ? हामीसँग यति प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरु छन् । मैले अहिलेसम्म दुनियाँको दशौं चक्कर लगाएँ होला । मलाई आश्चर्य लाग्छ, एकदमै पानी नभएका दुबई जस्ता अरब देशहरु पनि छन् । उनीहरुसँग प्राकृतिक सम्पदा केही पनि थिएन । अलिकति पेट्रोलियम पदार्थ थियो । त्यो पनि सकिन लागिसक्यो । यसको मतलव, संसारका केही पनि सम्पदा नभएका देशहरु पनि बुद्धिमत्ताबाट, मानव निर्मित सम्पदाबाट विकसित भइरहेका छन् । सिङ्गापुर त यूरोप नै भइसक्यो । हङ्कङ्ग त्यस्तै, ताइवान त्यस्तै छ । हामी भन्दा गरीब रहेका यी सबै एशियन देशहरु यो ५० वर्षमा यस्तो सम्पन्न भएका हुन् । हामी चाहीँ, जहाँको त्यहीँ छौं । तुलनात्मक रुपमा हामी हरेक वर्ष गरीब हुँदै गइरहेका छौं । तीस वर्षअघि नेपालमा एक वर्षमा एक करोड पर्यटक ल्याउन सकिने परिकल्पना गरेको थिएँ । तीस वर्षे दीर्घकालिन योजना बनाइयो भने अर्को शताब्दिको दोस्रो दशकमा अर्थात् २०२० सम्ममा एक वर्षमा एक करोड पर्यटक पुर्याउन सकिन्छ भनेर सन् १९९० मा लेखेको थिएँ । तर हामीकहाँ केवल आठ लाख पर्यटक आइरहेका थिए । यो लाजमर्दो कुरा हो । आइफेल टावर हेर्न ६ करोड पर्यटक आउँछन् भने सगरमाथा हेर्न किन एक करोड आउन सक्दैनन् ? अहिले त त्यो आठ लाखबाट पनि घटेर पाँच लाख ४० हजार मात्रै आएका छन् । प्रतिव्यक्ति आय दुनियाँमा बढिरहेको छ, हाम्रो भने सातसय ५० डलरमा रहेकोमा पनि यसपाली १० डलर घटेको छ । हाम्रा दुईटै छिमेकी संसारका सबल अर्थतन्त्र भएका देश बनिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा पनि तुलनात्मक रुपमा दुईटै छिमेकी धनी भइरहेका बेला हाम्रो अर्थतन्त्र झनै बढी कमजोर देखिइएको छ । अर्कोतर्फ हामी भएकै पक्षहरुमा पनि खस्किँदै गइरहेका छौं । म एक आध्यात्मीक व्यक्तियो कुराले मलाई असर नगर्नु पर्ने हो । यो कुरा राजनीतिक हो, अर्थशास्त्रीय हो, समाजशास्त्रीय हो । तर पनि मलाई सताइरहेको छ । आफूलाई जति सम्झाउन खोजे पनि यसले मलाई पिरोल्न छोडेको छैन । हामी गरीब हुँदै गइरहेका छौं । जसरी शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएपछि अनेक रोगहरुले सताउँछन् त्यसैगरी गरीबीका कारण पनि अनेक समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । गरीबी सबै समस्या, अपराध, भ्रष्टाचारको जरो हो ।
समस्या कहाँ कहाँ देख्नुहुन्छ ?
गरीबीको ठूलो समस्या हल गर्न मानसिक रुपमा हामीमध्ये कसैले पनि न राजनीतिज्ञले, न अर्थशास्त्रीले, न कसैले कुनै राष्ट्रिय रणनीति बनाएको देख्दिनँ । हरेक वर्ष बाहिरिई रहेका युवाहरु म विभिन्न देशमा पुग्दा निकै कष्टकर अवस्थामा काम गरिरहेको, बसिरहेको पाउँछु । अटाइ नअटाई बसेका, पालो गरेर सुत्नु पर्ने अवस्था छ । बिरामी हुँदा सुत्ने ठाउँ हुँदैन । त्यहाँ यस्ता धेरै समस्या छन् । यस बाहेक, वैदेशिक रोजगारीका कारण एकातिर लामो समय श्रीमान–श्रीमती टाढा हुँदा अन्यत्र सम्बन्ध बन्ने र परिवार बिखण्डन हुने अवस्था छ भने प्रायजसो तराईबाट एउटा समस्या आइरहेको छ कि श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाका घरका अन्य पुरुषहरु र विशेष गरी ससुराहरुबाट बलात्कारका घटना हुने, त्यसबाट पीडित भई महिलाले आत्महत्या गर्ने वा अपराध लुकाउन मार्ने जस्ता क्रम बढेका छन् । यस्ता समस्या भनेका गरीबीले निम्त्याएका समस्या हुन् । विकासका पनि आफ्नै खालका समस्या छन्, त्यसको अलग्गै कुराकानीको प्रसङ्ग जोड्न सकिन्छ ।
अरु कुन कुन क्षेत्रमा समस्या देख्नुहुन्छ ?
हामीले पुर्वाधार विकास गरेनौं । अमेरिकाले यो कुरा बुझेर दुईसय वर्षअघिदेखि पुर्वाधार विकासमा लाग्यो । एकसय वर्ष अगाडीदेखि उसको रेल, रोड बनिसकेको थियो । विगत ५० वर्ष अगाडीबाटै सानो शहरमा पनि एयरपोर्ट बनाइसकेको छ । एउटै शहरमा ४ ओटा ५ ओटासम्म एयरपोर्ट छन् । हामीकहाँ पूरै राष्ट्रमै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको एउटै एयरपोर्ट छैन । एउटा भएको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा राती १२ देखि बिहान ५ बजेसम्म सुरक्षित उडान तथा अवतरण गर्न सकिने स्थितिमा छैन । यो सन्देश बाहिर गइरहेको हुनाले आजभन्दा तीसवर्ष अगाडी जति अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइनहरु यहाँ आउँथे, आउन छोडे । सिङ्गापुर एयर, श्रीलङ्का एयरवेज, पाकिस्तान एयरवेज आउँथे । यहाँकै आरएनएसीकै प्लेन पनि सिधा फ्र्याङ्कफर्ट जान्थ्यो, लण्डन जान्थ्यो, पटना जान्थ्यो । अहिले छैनन् । भनेपछि हामी तीसवर्ष पछाडी गइसक्यौं । दुनियाँमा यो तीस वर्षमा एयरपोर्टमा सुधार, उडानमा सुधार आइरहेको छ । यो ५० वर्षमा त एशियाकै पनि राम्रो विकास भइसकेको छ । दक्षिण एशियामा हामीभन्दा गरीब राष्ट्रका रुपमा रहेको भुटानको पनि प्रतिव्यक्ति आय बढेर तीनहजार डलर पुगिसक्यो । ऊसँग दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स छन्, नयाँ नयाँ प्लेन किन्छ । दुईसय ५० डलरभन्दा बढी खर्च गर्नसक्ने पर्यटक मात्रै भित्र्याउँछ । म बच्चा हुँदा सिन्धुलीको आलु गाडाका गाडा भारत निर्यात् हुन्थ्यो, आँप जान्थ्यो तराईको धान निर्यात हुन्थ्यो । सरकारले निकासा बन्द गर्दा रातारात गरेर लुकेर पनि निकासी गर्थे । त्यतीबेला हामी खाद्यान्न निर्यातकर्ता देशका रुपमा थियौं । तर अहिले हामीले ८० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा पनि निर्यातमा समस्या भइरहेको छ ।
भारतका आँप पनि औषधी राखेर पकाइएका, गुणस्तर नभएको भनेर विगत तीन वर्षदेखि लण्डनले आयात गर्न रोकेको छ । पाकिस्तान, मलेशियाका आँपहरु जान्छन् । भारतको पनि गुणस्तर हाम्रो जस्तै हो, तर उनीहरुले सुधार गरिरहेका छन् । भारतीय औषधी सस्तो र गुणस्तर पनि भएका कारण विश्व बजारमा छाइरहेको छ । नेपालको ज्यालादर, घरभाडा तथा अन्य सबै कुरा सस्तो छ । त्यसैले गुणस्तर कायम गर्ने हो भने यहाँबाट पनि धेरै कुरा निर्यात गर्न सकिन्छ । यहाँबाट औषधी जान सक्छ । कपडा, जुन पहिले पनि जान्थ्यो, कार्पेट जान्थ्यो । अहिले धेरै घटेको छ ।
तपाईँ पहिले इञ्जिनियरिङ क्षेत्रसँग पनि सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो । त्यस हिसाबले तपाईँ इञ्जिनियरिङको गुणस्तरमा सुधार वा खस्केको के पाउनु हुन्छ ?
ओहो, सबै क्षेत्रमा गुणस्तर खस्केको छ । मैले यो पेशा सरकारको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (एनसीसीएन)बाट शुरु गरेको हुँ । शुरुमा त्यो कम्पनी इजरायलीहरुले स्थापना गरेको हो र स्वीस इञ्जिनियरहरु सल्लाहकार थिए । एनसीसीएनले त्यो बेला बनाएका सडकहरु अहिले पनि राम्रा छन् । महाकाल थानदेखि सिंहदरबारसम्मको रोड एनसीसीएनले बनाएको हो । भवनहरुमा अहिले कृषि विकास बैङ्क रहेको भवन त्यतिबेला आजभन्दा ४० वर्ष अगाडी बनेको हो । आज पनि जस्ताको तस्तै छ । पहिले परिवार नियोजनको भवन भनेर बनाएको र अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेको भवन आर्किटेक्टका हिसाबले त्यो बेला एशियाकै एकमात्र त्यस्तो भवन बनेको थियो । त्यसमा भवनको निर्माणमा ५० लाख रुपैयाँ लागेको थियो भने आर्किटेक्टमा मात्रै ४५ लाख रुपैयाँ लागेको थियो । आर्किटेक्टका हिसाबले त्यति राम्रो गरी बनाएको थियो । दुई तलाको थियो, पछि तला थपेर बिगारिदिए । पछि आएर एनसीसीएनमा पनि गडबडी शुरु भयो । त्यतिबेला बनाएका भवनहरु कुनैमा पनि लिकेज हुने वा अन्य कुनै समस्याहरु हुन्थेन । वाटर प्रुफ नराख्दा पनि त्योबेला पानी चुहिँदैन थियो, अहिले वाटर प्रुफ राख्दा पनि चुहिन्छ । यस्को कारण इञ्जिनियरिङमा पनि अत्यन्तै धेरै भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार त्यो बेला पनि थियो । २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत इञ्जिनियरहरुले खान्थे । काम राम्रै हुन्थ्यो । अहिले त ४० प्रतिशत, ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसैले अहिलेका रोडमा बिछ्याइएका कालोपत्रे दुई महीनामै जान्छन् ।
तपाईँ संसारका धेरै देश घुमिसक्नु भएको छ । विकसित देशको तुलनामा हामीले के के कुरामा सोचेनौं र आज यो अवस्थामा छौं ?
युरोप अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुले पुर्वाधारमा धेरै लगानी गरे । सय वर्ष अगाडी नै रेलवे, रोड नेटवर्क पूरा गरिसकेको थियो । अब खाली पुलहरु बनाउँदैछ । अस्ट्रेलियाको राजधानी सिड्नीमा रहेको सिड्नी ब्रिज सय वर्ष अगाडी बनेको हो, जुनबेला संसारमा गाडी भर्खर आएको थियो । टाँगाहरु मात्र चल्थे । त्यो समयमा बनाएको सिड्नीको ६ लेनको पुलमा अहिले पनि बिना ट्राफिक जाम मजाले यतिका वर्षदेखि धानिरहेको छ । यति टाढा सोचेर उनीहरुले संरचना बनाएका छन् ।
विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधार हेर्दा हाम्रो आर्थिक विकासको जटिलता र सम्भाव्यतालाई कसरी हेर्न सकिएला ?
२०४६ सालअगाडीको त राजनीतिक पृष्ठभूमि नै अलग थियो । एकजनाले अनुसन्धान गरेका छन्, ४६ साल पछि साना ठूला गरेर तीनहजार उद्योग धन्दा बन्द भएका छन् । कतिपयमा त म आफैंले इञ्जिनियरका रुपमा काम गरेका पनि छन् भने धेरैमा म पुगेको छु । यी बन्द भएकाहरुमा रसियाले चाइनाले, अरुले बनाइदिएको र सरकारले चलाएकाहरु धेरै छन् । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले चलाएका पनि बन्द भएका छन्, जस्तो कि हेटौंडा छाला उद्योग ।
सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगहरु बन्द हुनुमा सन् १९९१ पछि सरकारले लिएको निजीकरणको नीतिको पनि भूमिका छ । सरकारले व्यवसाय गरेर बस्ने होइन, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यस्ता उद्योग बन्द हुनुमा चित्त दुखाई नहुनु पर्ने होइन र ?
मलाई चित्त दुखाई छ । सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने अहिलेको धारणा मात्रै हो । महेन्द्रको पालामा, विरेन्द्रको पालामा दुई ओटा ईँटा कारखाना नाफामै चलिरहेका थिए । जनकपुर चुरोट कारखाना, चिनी मिलहरु नाफामै चलिरहेका थिए । म पनि तपाईँसँग सहमत छु कि, सरकारले व्यापार गर्नु हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई नै दिनुपर्छ । तर त्यो बेला निजी क्षेत्रसँग लगानी गर्ने पैसा थिएन । तयार पनि थिएनन् । जसले गर्दा सरकारले उद्योग चलाउनुको विकल्प नै थिएन । सबै उद्योग नाफामै थिए । निजी क्षेत्रले चलाउनु पर्छ भनेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई दियो । निजी क्षेत्रले मोटो पैसा राजनीतिलाई खुवाए, बारीको मूल्यमा जग्गा र मेसिन कब्जा गरे अनि उद्योग बन्द गरिदिए । प्रजातन्त्र आएपछि जिमएमहरु सबै राजनीतिक नियुक्ती हुन थालेपछि समस्या आउन थाल्यो । म जनकपुरको वासिन्दा । मैले जनकपुर चुरोट कारखानाले जनकपुरको अर्थतन्त्रमा ल्याएको परिवर्तनलाई नजिकबाट हेरेको छु । त्यस उद्योगले तीनहजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो । त्यो कारखाना बन्द हुनुको कारण राजनीतिक दलले एउटाले जिएम र अर्कोले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने वा एउटै पार्टीको पनि अलग अलग गुटको पठाउने कारणले बिग्रियो । आरएनएसी बिग्रिनुको कारण पनि त्यही हो । अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा बोलचाल नहुने, एउटै अफिसमा चिट्ठी काटेर कुरा हुने मैले आफैंले देखेको छु । व्यवस्थापकिय विशेषज्ञ पठाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नाले यो अवस्था आएको हो । सँगै शुरु भएका आरएनएसी र थाई एयरमा पहिले आरएनएसीमा टिकट खोजिन्थ्यो, त्यसमा पाइएन भने मात्रै थाई एयरको टिकट काटिन्थ्यो । त्यति राम्रो व्यवस्था थियो । सरकारकै व्यवस्थापन थियो तर पनि राम्रो थियो । किनभने राजाको डर हुन्थ्यो । त्यतिबेला विशेषज्ञ नियुक्त हुन्थ्यो ।
त्यतिबेला म आरएनएसीसँग जोडिएर काम पनि गरेको थिएँ । त्यतिबेलाका जिएमले भन्नुहुन्थ्यो, हामीले पूर्वमा जापानमा र पश्चिममा बेलायतमा उडान गरिसक्यौं, अब वाइडबडी प्लेन किन्ने र अमेरिका डाइरेक्ट फ्लाइट गर्ने हो भनेर । त्यतिसम्म विकसित थियो । त्यतिबेला त्यस्तो जोश थियो । अमेरिकामा प्रायः मलहरु अहिले गाउँतिर बढी बनिरहेका छन् । शहरभन्दा ५० किलोमिटर १०० किलोमिटर पर खोल्छन् । जब यहाँ मल बन्दैछ भनेर निजी क्षेत्रले बोर्ड राख्छ, मल एक÷दुई वर्ष पछि बन्नुछ भने सरकारले रोड अहिलेदेखि नै विस्तार गर्न थाल्छ । ताकि मल बनिसकेपछि ट्राफिक बढ्छ र ट्राफिक जाम नहोस् भनेर उनीहरु यसरी काम गर्छन् । हाम्रोमा त्यस किसिमको काम नै हुँदैनन् । अरु के कुरा गर्नु यतिका वर्षदेखि चलेका काठमाडौं छिर्ने कुनै नाका छैनन् जहाँ जाम नहोस् ।
पुर्वाधार बाहेक विदेशीहरुले अरु के के राम्रो गरेको देख्नुभयो ?
उनीहरुकहाँ प्राकृतिक सम्पदा थिएनन्, केवल मानव संशाधनलाई परिचालन गरेर नै विकास गरे । दुबईमा ढुङ्गा माटो केही थिएन । माटो इण्डियाबाट र ढुङ्गा पाकिस्तानबाट लगे । त्यसरी उनीहरुले देशको निर्माण गरे । बालुवा नै बालुवा भएको उनीहरुको देशमा हरियाली बनाएका छन् । हाम्रोमा प्राकृतिक रुपमै भएको हरियाली, हिमाल जस्ता कुराहरु हुँदा पनि यस्तो बिजोग छ ।
देश विकास गर्न के के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
गर्नु त धेरै कुरा पर्छ । आआफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो । मसँग त अधिकार छैन, एउटा नागरिकका नाताले पिर मात्रै पोखिराको छु । र आफूले सकेसम्म मानिसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै जनचेतना बाँढिरहेको छु । पहिलो कुरा त मानिसमा जनचेतना जगाउनु पर्यो । ‘यो मानव निर्मित गरीबी हो । हामी यसलाई मेट्न सक्छौं । यसमा निराश हुनुपर्ने कुनै जरुरत छैन । यो कुनै दूर्भाग्यले भएको होइन, हाम्रो बेवकुफीले भइरहेको हो’ भन्ने चेतना विस्तार गर्नुपर्यो । अरु देशले यस्तो गर्न सके भने हामी पनि गर्न सक्छौं । देशलाई यो अवस्थामा ल्याउने नेताहरु छान्ने काम त हामीहरुले नै गरिरहेका छौं । त्यसैले यसको दोष हामीले नै लिनुपर्छ । हामी जनता, संचारमाध्यम, कानून सबैले नेताको पैसामा बिक्न छोड्ने हो भने सुधार ल्याउन सकिन्छ । मात्र एउटा लक्ष्य बनाएर यति वर्षमा यसो गर्ने भन्ने रणनीति भएको नेतृत्व चयन गर्नुपर्यो ।
यदि तपाईँले विकासको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाउनु भयो भने के के गर्नुहुन्छ ?
शुरुमा म संचार माध्यमबाट जनचेतना पैदा गर्छु र मानिसमा उत्साह भर्छु । त्यसपछि दीर्घकालिन योजना बनाउँनु पर्छ । एउटा वाइडबडी प्लेन ल्याण्ड गर्न सक्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको कम्तिमा एउटा एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ । एयरलाइन्स विदेशकै चले पनि फरक पर्दैन । सडकको संरचनाहरु राम्रो बनाउनुपर्छ । र ल एण्ड अर्डर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसपछि देश त आफैंमा स्वर्ग छँदैछ । लोडशेडिङ् नेपालबाट एक वर्षमा अन्त्य गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् आयोजना सकिन पनि दुई तीन वर्षदेखि पाँच सात वर्ष लाग्छ । त्यति लाग्नुपर्ने होइन, वातावरणीय अध्ययनमै दुई वर्ष लगाइदिने लगायतका कुराहरुले समय लागिरहेको छ । सबैकुरा वैज्ञानिक हिसाबले गर्यो भने वातावरणको कुरा दुई महीनामा गर्न सकिन्छ । विकासका योजना रोक्ने, नेपाल बन्द गर्नेलाई ुअराष्ट्रिय तत्वु घोषणा गरिनुपर्छ । एकदिन नेपाल बन्द हुँदा प्रत्यक्ष ४ अर्ब रुपैयाँको नोक्सान हुन्छ भनिन्छ । अप्रत्यक्ष त त्योभन्दा धेरै हुन्छ । ५० हजार रुपैयाँ लुट्नेलाई जेलमा हालिन्छ, एकलाख लुट्नेलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइन्छ । तर ४ अर्ब लुट्नेलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ ।
मुख्य कुरा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा नै छैन । संविधान मै पनि छैन । संविधानको पहिलो परिच्छेदमै देशलाई यति वर्षमा सम्पन्न बनाउने भन्ने एजेण्डा हुनुपथ्र्यो र त्यस काममा भाँजो हाल्ने सबैलाई राष्ट्रघाती, देशद्रोही घोषणा गरेर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो ।
अहिले यो नियम आएको छ, बन्द गराउँदा हुने क्षति बन्दकर्ताबाट भराउने भन्ने ।
भगवान गरोस्, यो नियम लागू होस् । संविधानमै के लेख्नुपर्छ भने, चाहे उद्योगपतिले बन्द गरोस्, चाहे मजदुरले त्यस बन्दबाट भएको क्षति उनीहरुबाट तान्नुपर्छ । चाइनामा कसैले उद्योग बन्द गराउन सक्छ ? त्यसरी बन्द गराएर देशलाई घाटामा लैजानेलाई कहिल्यै राजनीतिमा आउन नपाउने बनाउनु पर्छ ।
नयाँ पुराना धेरै नेपाली नेताहरुसँग तपाईँको सम्पर्क र उठबस् छ । उनीहरुमा विकासको भोक छ कि छैन ? के पाउनुहुन्छ ?
उनीहरु पनि व्यवस्थाबाट पीडित छन् । जुन समानुपातिक सहभागिता गराउने भन्ने संविधान बनाइयो, यसले कहिल्यै काम गर्न दिँदैन । स्थायी सरकार बन्नै सक्दैन । जस्तो कि मैले ओशोको नामबाट एउटा पार्टी खोलें भने नेपालमा एकलाख सन्यासी छन् । पाँचओटा सीट त समानुपातिकबाट पाइहाल्छु । त्यसैबाट बार्गेनिङ् गरेर मन्त्री बनिहालिन्छ । जातिय नारा दिनुस्, भाषाको नारा, क्षेत्रीय नारा दिएर प्रत्यक्ष सीट नजिते पनि समानुपातिक त जितिहालिन्छ । त्यसले प्रभाव पार्दै जान्छ । यो संविधान रहँदासम्म स्थायी सरकार आउँदैन, जबसम्म त्यसमा रहेको ‘सरकार प्रमुख समानुपातिकबाट चयन गर्ने’ व्यवस्था रहन्छ । सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष चुनावबाट बनाउनु पर्छ । पाँच वर्ष कार्यकाल राख्दा मान्छे तानाशाही होला, तीनै वर्ष राखौं । वा तीन वर्षपछि संसदबाट फेरी म्याण्डेड लिने व्यवस्था राखौं । त्यो व्यक्तिमा म कसैको दयामायाले आएको होइन जनताबाट चुनिएरै आएको हुँ भन्ने आत्मबल हुन्छ । उसले इण्डियनसँग पनि चाइनिजसँग पनि हात मिलाएरै एग्रिमेण्ट गर्न सक्छ । ऊ झुक्दैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री आँखा मिलाएर कुरा गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरुकै दयामायाले प्रधानमन्त्री बनाइएका हुन्छन् ।
ध्यान र आर्थिक विकाससँग कुनै सम्बन्ध हुनसक्छ ?
ध्यान भनेको सर्वाङ्णि विकास हो । मनुष्यको चेतनाको विकास हो । ध्यानले आर्थिक बेहोशी होस् कि राजनीतिक बेहोशी होस्, सबलाई तोड्छ । महत्वाकाङ्क्षालाई सम्झाउँछ, वास्तविक बनाउँछ । अहिले हामी स्वप्नमा जिउँने अति महत्वाकाङ्क्षी मानिस बनेका छौं । त्यसलाई ध्यानले सही दिशा दिन्छ ।
त्यसो भए त सजिलो रहेछ त देश विकासको सुत्र, नेताहरुलाई ल्याउँदै सात दिनको वा २१ दिनको ध्यान गराउँदै पठाउने हो भने त भइहाल्ने रहेछ त ।
कुन नेता बस्छन् सात दिन, एक्काइस दिनको ध्यानमा ? एकदिन बसाउन गाह्रो छ । आर्मीहरु लगाए मात्रै आउन तयार होलान् ।
नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन नेपालमा रहेका ओशो सेण्टरहरुले के कस्ता भूमिका खेलिरहेका छन् ?
धेरै महत्वपूर्ण भूमिकाहरु खेलिरहेका छन् । जस्तो कि, अहिलेसम्म तपोवनमा एकसय छ राष्ट्रका व्यक्तिहरु आइसके । अहिले संसारमै जम्मा एकसय ९० देस छन् । त्यसमा घुम्ने राष्ट्र त्यहि एकसय २५ जति छन् । जतिका घुम्छन् त्यसमध्ये लगभग ९० प्रतिशत देशका मान्छे हामीकहाँ आइसके । सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने यो वर्ष नेपालमा पाँच लाख ४० हजार पर्यटक आए । जो पदयात्रा गर्दैन उनीहरुको औसत बसाई ४ दिन छ, काठमाडौं, पोखरा, चितवनमा गरेर । जो पदयात्रा गर्छन्, उनीहरुको औसत बसाई साढे ११ दिन छ । हामीकहाँ आउने पर्यटक भिसा नसकिएसम्म बसेका पनि छन् । एक महीना, दुई महीना, अझ विद्यार्थी भिसा, व्यापार भिसा लिएर पाँच÷पाँच महीना बस्नेहरु पनि छन् । रसियनहरु आए भने त उनीहरु सामान्यतया तीन–चार महीना नबसी जाँदैनन् । हामीले यसपटक गरेको हिसाबमा जति रात पर्यटक नेपाल बसे त्यसको एक प्रतिशत तपोवनले गर्दा बसेको तथ्याङ्क हामीले निकालेका छौं । हामीकहाँ युक्रेन, इस्टोनिया, ताजिकिस्तान, पोल्याण्ड, हँगेरीबाट पर्यटक आइरहेका छन्, जहाँबाट नेपालमा पर्यटक नै आइरहेका थिएनन् । पूर्वी युरोपबाट हामीले पर्यटक तानिरहेका छौं जहाँबाट धेरै कम पर्यटक आउँथे ।
तपोवनमा जो आउँछन् र बस्छन्, यहाँको दालभात खान्छन् । यहाँ बसुञ्जेल चुरोट रक्सी, माछामासु पनि केही खान पाउँदैनन्, उनीहरुको खाने बानीमा परिवर्तन आउँछ । अनि जब म उनीहरुको देशमा पुग्छु र मलाई उनीहरुकोमा खाना खान बोलाउँछन्, तब दालभात नै पकाएर खुवाउँछन् । यसको मतलव हामीले हाम्रो देशको फुड कल्चरलाई विस्तार गर्न पनि भूमिका खेलिरहेका छौं । तपोवनमा आएर जानेहरुको घरमा उनीहरुले पशुपतिनाथको, स्वयम्भूको मूर्ती, थाङ्का, खुकुरी राखेका हुन्छन् । उनीहरु एक हिसाबले नेपालको राजदूतावासको रुपमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले एक पैसा खर्च नगरी हामीले करीब ४० हजार राजदूतावास बनाइसक्यौं । त्यसपछि उनीहरु नेपाललाई आफ्नो गन्तव्य बनाउँछन् । पहिले धेरै देशमा जाँदा त्यहाँका मानिसलाई नेपाल थाहा थिएन । अहिले तपोवनले गर्दा पनि धेरैलाई थाहा भइसकेको छ । हालसालै वासिङ्टन पोष्टले निकालेको थियो, नेपालको एक गन्तव्य ‘तपोवन’ भनेर ।
तपोवनको अरु ठाउँमा विस्तार गर्ने केही योजना छ कि ?
म त सपना देख्ने मान्छे हुँ । अहिले बनेका सातै प्रदेशमा एक एक ओटा कम्यून बनाउने मेरो सपना छ । सातै प्रदेश क्षेत्रीयताका आधारमा बनेको छ, भौगोलिक एकाइ भए पनि राष्ट्रिय एकतामा बाधा पार्ला कि भन्ने डर छ, नहोस् त्यस्तो । जस्तो कि भाषाका आधारमा राज्य बनाइएको इण्डिया स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष भइसक्दा पनि महाराष्ट्रमा ‘बिहारी भाइके दूकान से चाय मत पिना’, ‘यूपी भाइके दूकान से सब्जी मत खरिदना’, ‘महाराष्ट्रियनके दूकान से खरिदो’ भन्ने नारा दिइन्छ, अझै । क्षेत्रीयताको यस्तो खराब बिख हुन्छ । आसामबाट नेपालीलाई खेद्यो, थाहै छ । भाषा, जातिको यस्तै विभेद नेपालमा पनि राज्यले खडा गर्ला, एक राज्यको मानिसले अर्को राज्यको मानिसलाई हेप्ला भन्ने मलाई डर छ । हामीले एक किसिमको सद्भाव पैदा गरेका छौं । यही सद्भाव भोलि प्रदेशमा स्थापना गरिने कम्यूनबाट पनि बाँढ्ने चाहना छ ।
अन्तमा थप केहि सुझाव ?
शिक्षामा सुधार गरौं । जस्तो कि ग्रयाजुएट भएको एउटा व्यक्तिले न खेतमा काम गर्न सक्छ, न एउटा पाइप जोड्न सक्छ न काम नै पाउँछ । त्यसैले जब ओरिएण्टेड शिक्षा हुनुपर्यो । सबै मानिसले विश्वविद्यालयमा पढ्नु पर्छ भन्ने छैन । मानौं प्लस टू पास गरेपछि एउटा एउटा सीप सिकाउनु पर्यो । सिस्टम बसालियो भने गर्न नचाहँनेले पनि गर्छन् । तीन महीना तालिम दिइयो भने, हरेक सीपमा पोख्त बनाउन सकिन्छ । हामी कहिल्यै अरुको गुलाम भएनौं भनेर गर्व गर्यौं । होला हामी ब्रिटिसको गुलाम भएनौं तर आफ्नै मान्छे, राणाको गुलाम भयौं र आफ्नैहरुबाट गुलाम हुने क्रम अझै जारी छ ।
मझौला र साना उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ
२३ आश्विन २०७४, सोमबार ०९:३०
१३ भाद्र २०७४, मंगलवार १३:२८
नाडा अटो शो अन्तरराष्ट्रिय स्तरको भइसकेको छ
११ भाद्र २०७४, आईतवार १३:४८
सम्पूर्ण पुनर्बीमाको जोखीम एउटै कम्पनीले लिन सक्दैन
१७ जेष्ठ २०७४, बुधबार १०:५१